XOG RASMI AH: Masuuliyiin ka socda Sacuudiga oo Muqdisho ku soo wajahan. – Xeernews24
XOG RASMI AH: Masuuliyiin ka socda Sacuudiga oo Muqdisho ku soo wajahan.
Warar lagu kalsoonaan karo oo aan heleyno ayaa sheegaya in wafdi ka socda dowladda Sacuudi Carabiya ay saaka ku soo wajahan magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya.
Mr Jubeyr ayaa safaro ku maraya wadamo badan oo kuwa Islaamka ah, si uu taageero ugu raadiyo qorshaha Sacuudiga doonayo inuu ku go’doomiyo Qatar.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Sacuudiga uu siinayo fursadii u dambeysay dowladda Soomaaliya ee ku aadan inay labada dhinac mid la safato.
Todobaadkii hore ayaa la sheegay in La Taliyaha Boqorka Sacuudiga oo safar qarsoodi ah ku yimid magaalada Muqdisho uu kala laabtay natiijo la’aan, kaddib markii dowladda Soomaaliya diiday inay xidhiidhka u jarto Qatar.
Shalay ayay aheyd markii Wafdi uu hoggaaminayay Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda Qatar uu soo gaadhay magaalada Muqdisho, si uu dowladda Soomaaliya ugu mahad celiyo go’aanka dhex dhexaadnimada ay qaadatay.
Wasiiru dowlaha ayaa la kulmay Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, waxaa laga hadlay xidhiidhka labada dal, inkastoo kulamadan ay ahaayeen kuwo Saxaafada aanay goob joog ka aheyn, hadana wax faah faahin ah dowladdu kama soo saarin.
Soomaaliya ayaa la kulmeysa cadaadis uga imaanaya Xulafada uu hoggaamiyo Sacuudiga, waxaana heysata labo daran mid dooro ah, cidii ay la safan laheyd.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/somalia-and-saudi.jpg 213 237 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-06-12 11:20:222017-06-12 11:20:22XOG RASMI AH: Masuuliyiin ka socda Sacuudiga oo Muqdisho ku soo wajahan.
Daawo:Dawlada Jabuuti oo 14 Juun u dabaaldegaysa Guushii ugu weynayd ee ay dunida... Daawasho wacan Xaqiiqda Dhabta ah ee ku Qotomada Maamulka Hargeysa.